ISAHLUKO SE-10: ISALATHISO UKULANDELA IINJONGO-IGeofumadas
10 ISAHLUKO: YOKULANDELELA osnap
"I-Object Snap Trace" ulwandiso oluxabisekileyo lweempawu ze "Object Snap" zokwenza umzobo. Umsebenzi wayo kukubeka imigca yeefestile zokwexeshana ezinokuthi zithathwe “kwiZalathiso zeZinto” ukuze zisayinwe kwaye zifumane amanqaku ongezelelweyo xa kusenziwa imiyalelo yokuzoba.
Ngamanye amagama, ngelixa sisazobe kwaye sakuba sizenzile izingqinisiso, i-Autocad ivelisa imigca yexesha -iimpawu ezo ezahlulwayo ngokucacileyo kwezinye ukuba zibekwe kwindawo-esivumela "ukulandela" indawo yamanqaku amatsha. Ukuba sisebenza ngaphezulu kwesalathiso esingaphezulu kwesinye, oko siya kufumana kuya kuba ngaphezulu komgca omnye wokulandela umkhondo kunye nongqamaniso olungena phakathi kwabo, ngokungathi zizinto ezintsha kunye nezalathiso zabo.
Kumele uqaphele ukuba umgca ngamnye wokulandelela unayo ilebula apho ibonisa ukuba i-polar idibeneyo idibeneyo, njengoko sisusa isikhombisi, ukuze sikwazi ukumbamba amanqaku kwiindawo ezizodwa eziphawulwe ngala mabhile. Kwanjalo, xa idilesi entsha isetyenziswe ngokubhekiselele kwisalathiso esisetyenzisiweyo, kunokwenzeka ukuthabatha umgama kumgca wokulandelela ngqo kwiwindow yomyalelo. Makhe sibone umzekelo omtsha.
Kwibhokisi yencoko yabase- "Drawing Parameter", kwithebhu ethi "Reference Reference", sinakho ukuvumela okanye ukukhubekisa ukulandelela. Nangona, njengoko besibonisile ekuqaleni, singenza nako nakwibhari yenqanaba. Emva koko, ukusebenza kwezixhobo zokulandela umkhondo ezibonakalayo, ezibizwa ngokuba yi-Autotrack, zilungiselelwe kwi "Options" ibhokisi yencoko yababini kwi "Drawing" tab esele siyisebenzisa ngaphambili.
Post edlulileyo«Ngaphambilini 9.1 amanqaku lwangaku kwaye izihluzi .Wathi
Post Next ISAHLUKO 11: YOKULANDELELA polarOkulandelayo »